Adeegyada - Yuxin Wright Industrial Prototype Co., Ltd.
Prototyping iyo Warshadaynta ee Maamulka Mashruuca Guriga
Yu Xin Wright wuxuu bixiyaa dhammaan noocyada kala duwan ee adeegsiga noocyada wax soo saarka iyo wax soo saarka. Marxalad kasta oo hawsha ka mid ah waxaa lagu dhammaystirayaa isla saqafka. Injineeradayadu waxay diyaar u yihiin inay ka caawiyaan naqshadaha, xulashada maaddada, iyo sawiradaada CAD. Dhammaan waaxyaha wax soo saarkeennu waxay ku xiran yihiin xiriir wanaagsan, nabadgelyo, iyo karti. Macna malaha cabirka mashruuca, macaamil kasta wuxuu leeyahay miisaanka buuxa ee adeegyadeena gadaashooda.
Si aan ugu sii jirno madaxa awoodaha wax soo saarka CNC, waxaan adeegsanaa mashiinada ugu horumarsan oo ku qalabaysan midka ugu dambeeya ee taageeraya software-ka. Injineeradayadu waxay wali kujiraan safka hore ee isbedelada warshadaha iyo horumarka, taasoo keeneeysa awood wax soo saar aan lala simin. Iyadoo la adeegsanayo ururintayada 3, 4-, iyo 5-dhidibka mashiinnada CNC waxaan u adeegi karnaa tiro badan oo codsiyo ah iyadoo la adeegsanayo tiro bir ah, aalado, iyo caagag. Hayso qaybo saxan oo dhameystiran oo biro ah 2-5 maalmood gudahood.
Adeegyada Daabacaadda 3D
Daabacaadda 3D waa horumarkii ugu dambeeyay ee abuurista noocyada. Adoo adeegsanaya daabacaadda 'SLA' iyo 'SLS', Yu Xin Wright Tech wuxuu soo saari karaa matalaad sax ah, yar, matalaya qaabeyntaada kaliya 24-48 saacadood! 3D porotypes waxay ku fiican tahay go'aaminta shaqada sheyga, sharraxaadda fikradda, ama soo jiidashada maalgaliye.
Birta xaashidu waa mid adag, oo malleable ah, oo aad loo jecel yahay. Birta xaashidu waa mid u adkaysata daxalka iyo kulaylka labadaba. Biraha badan oo ay ka mid yihiin daasadda, birta birta ah, nikkel, naxaas, iyo aluminium ayaa loo isticmaali karaa been-abuurka birta. Birta xaashidu waxay u oggolaaneysaa naqshadeynta iyo soo saarista qaabab adag iyo naqshadeyn, iyadoo la dhigayo qaybo lagu sameeyay birta xaashida ah ee warshadaha horumarsan adduunka.
Soosaar kumanaan qaybo balaastik ah oo isku mid ah oo isku dhafan oo dhaqso leh adeegyo wax ku biirista balaastigga ah by Yu Xin Wright. Qaybaha lagu sameeyay balaastigga ayaa ah kiimiko ahaan, bayoolaji ahaan, iyo bay'ad ahaanba u adkaysta iyaga oo ka dhigaya kuwo waxtar u leh warshado aad u tiro badan. Wax taaj oo kale oo lagu durayo balaastik ayaa ku shaqeysa caagag badan oo kala duwan, mid walibana lagu dhameyn karo saameyn kala duwan gudaha guriga. Waxaan ku abuuri karnaa aaladaha aluminium ee adag noocyada ugu yar 5-7 maalmood. Qalabka wax soo saarka waxaa lagu soo saari karaa 2-4 toddobaad iyadoo la isticmaalayo birta P20.
Dareemida Die ayaa qaabab bir ah u samaysa qaabab loo sameeyay qeexitaankaaga. Dhimashada waxaa lagu sameeyaa xaruntayada CNC, ka dibna waxaa loo isticmaalaa in lagu abuuro isku dhejisyo bir ah. Qasnadaha waa la qaboojiyaa waana la kormeeraa, iyo adeegyo badan oo dhammaystir ah ayaa loo codsan karaa ujeedo iyo ujeedooyin qurxin. Waxaan ku soo saari karnaa qalabka loo yaqaan 'Die Casted tool' oo keliya 2-4 toddobaad iyadoo la isticmaalayo birta H13. Waxaan sidoo kale bixinnaa: Tijaabinta Daadinta, Dareerida, Anodizing, Dahaarka Powder, Gelinta, makiinadda sare, iyo nadaafadda.
Wax taaj oo kale Silicone
Waxyaabaha lagu sameeyo isticmaalka caagga silikoonku waa kuwo u adkaysata daxalka, kiimikooyinka, korontadu saamayn weydo, oo ku adkaysta xaaladaha daran. Xaqiiqdii, Liquid Silicone Rubber (LSR) ayaa ku jira baahi aad u sareysa maxaa yeelay waxay ku isticmaashaa ku dhowaad warshadaha adduunka oo dhan. LSR waxaa lagu heli karaa midabyo badan, waxaa loo isticmaali karaa daabacaadda 3D, waxaana loo isticmaali karaa in la isku duro si loo abuuro kumanaan unug.
Waxaan leenahay waaxda dhammeystirta gudaha oo awood u leh in lagu dabaqo tiro aan caadi aheyn oo daahan ah iyo dhammeystir ah mashaariicdaada dhameystirtay. Adeegyada dhammeeya waxay bixiyaan aragti dheeri ah iyo adkeysi loogu talagalay noocyada hore, wax soo saarka dufcaddu yartahay, iyo wax soo saarka hooseeya. Iswaafajinta midabka gaarka ah, waxaan u adeegsanaa nidaamka u dhigma midabka Pantone saxsanaanta xad dhaafka ah iyo isku xirnaanta bilaa cilmiga ah.